युवा अभिनेत्री Lyubov Zaitseva टिभी श्रृंखला एक तारा धन्यवाद भयो। "आमा र Daughters", "प्रलोभन शहर", "चास Volkova।" यो उनको सहभागिता संग सबै भन्दा प्रसिद्ध टेलिभिजन परियोजनाहरू छ। सकारात्मक भन्दा Ljube नकारात्मक भूमिका विश्वास गर्न निर्देशक थप इच्छुक। अक्सर तपाईं गीतिनाटकहरू र हास्य मा केटी हेर्न सक्छन्। उनको जीवन र काम बारे अरू के ज्ञात छ?
अभिनेत्री Lyubov Zaitseva: बाल्यकाल र किशोरावस्था
भविष्यमा तारा श्रृंखला Yaroslavl क्षेत्रमा जन्म भएको थियो, मे 1982 मा आनन्दित घटना थियो। छिट्टै उनको छोरी जन्म पछि परिवार उहाँले आफ्नो बाल्यकाल र लुबा खर्च जहाँ मास्को, सारियो। आफ्नो स्कूल वर्ष मा पनि, अभिनेत्री Lyubov Zaitseva "Jumble" newsreel मा तारा अङ्कित। उनको सहभागिता, सबै भन्दा लोकप्रिय प्राप्त श्रृंखला "स्पेक", पहिलो प्रेम समर्पित को पूरै धेरै एपिसोड।
त्यो एक सुविधा फिलिम मा एक सानो भूमिका चढाइने जब केटी बल्लतल्ल 11 वर्ष पुरानो थियो। नाटक "विक थाड़्ना-ट्याग र कार," शुरू भयो बेहतरीन जो अभिनेत्री Lyubov Zaitseva, दर्शक गर्न 1993 मा अदालत प्रस्तुत गरियो। यो चित्र, को युवा दर्शक केन्द्रित मा, लुबा को बोर्डिङ स्कूल को एक छात्रा को छवि embodied छ।
स्कूल को अन्त द्वारा Zaitsev को अभिनय पेशा संग आफ्नो जीवन लिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छ। पहिलो प्रयास मा प्रतिभाशाली केटी एक विद्यार्थी Schepkinskogo विद्यालय बन्न व्यवस्थित। त्यो Seleznev र Afonin नेतृत्व भनेर पाठ्यक्रम मा पायो।
चलचित्र र शृंखला
2004 मा, अभिनेत्री Lyubov Zaitseva सेट फेरि थियो। उनले प्रमुख भूमिका को एक भयो, को कमेडी Fedor Popov "चार ट्याक्सी चालक र एक कुकुर" मा तारा अङ्कित। Lyuba गरेको हेरोइन एक साहसी र स्वतन्त्र तातियाना Zhichkin अन्तिम autoracer भयो।
त्यसै वर्ष प्रकाश चित्रकला Zaitseva संग "व्यक्तिगत नम्बर" देखे। त्यो एक सानो भूमिका बालिका अस्थाइ बन्दि प्ले। त्यो पनि टिभी परियोजना "को पिता को पाप", Irina Androsov रूपमा reincarnated जो धेरै एपिसोड मा देखियो। Lyuba श्रृंखला "युद्ध को मानिस," "क्लब," "अधिकारी" मा र चलचित्र मा "जीवित" एउटा सानो भूमिका मिल्यो।
प्रेम - कि निर्देशक नकारात्मक भूमिकाको मा गोली रुचि अभिनेत्री। यो सबै श्रृंखला "आमा र Daughters" त्यो Jeanne प्ले जो संग थाले। टिभी शो मा Zaitseva वर्ण - धेरै जटिल चरित्र, स्वार्थी र narcissistic संग केटी। JEANNE एक प्रतिद्वन्द्वी श्रृंखला निरन्तर फोहर कुराहरू गरिरहेको, समस्या मा उनको ड्र मुख्य पात्र छ।
मूल्याङ्कन श्रृंखला को लडी मा "दुई Fates" अर्को नकारात्मक भूमिका, अभिनेत्री Lyubov Zaitseva प्ले। जीवनी केटी यसलाई 2008 मा भयो कि पुष्टि गर्छ। जो आफ्नो लक्ष्य बाटो मा दूर सबै Sweeps महिलाहरु, - लुबा लुसी रूपमा तारा अङ्कित। उनको चरित्र सानो बदमासी मा लगे छैन, यो शाब्दिक आफ्ना शत्रुलाई नाश। Zaitseva यसलाई निरन्तर लुसी को अनैतिकता, मान्छे प्रयोग उनको बानी द्वारा रिसले छ देखि, यो भूमिका निर्वाह गर्न धेरै गाह्रो थियो।
निस्सन्देह, अभिनेत्री मात्र नकारात्मक भूमिका छ। यो को प्रमाण प्रहरी को दैनिक जीवन को बताउँछ जो श्रृंखला "को घन्टा Volkova," छ। यो टिभि लुबा लेफ्टिनेन्टस्क्याट Zhanny Ogurtsovoy को छवि embodied।
को "प्रलोभन शहर" मा तारा जवान गायक मारिया Svetlova, किनभने उनको जीवन वास्तविक खतरा द्वारा के धम्की छ को, एक आपराधिक प्रेम पतन गर्ने को छवि embodies। पनि उल्लेखनीय मिनी श्रृंखला "भाडामा को भाग्य," ओल्गा Zaitseva प्ले जो छ। यसको हेरोइन - एक चतुर, ऊर्जावान र आत्म-विश्वस्त केटी।
दृश्य पछाडि जीवन
प्रशंसक मात्र होइन भूमिका रुचि राख्नुहुन्छ भनेर 34 वर्ष अभिनेत्री Lyubov Zaitseva खेल्न व्यवस्थित गर्न। व्यक्तिगत जीवन गर्म र बेहवा श्यामला पनि सार्वजनिक लिन्छ। विगतमा, केटी एक सहयोगी Alekseem Paninym एक scandalous सम्बन्ध थियो। एलेक्स लुबा र फिल्म तारा अङ्कित "चार ट्याक्सी चालक र एक कुकुर।" extravagant जोडी कुनै न कुनै थियो तोड्न, पनि अभिनेता प्रत्येक अन्य मा अदालत मा, revelatory प्रेस साक्षात्कार उल्लेख छैन खुवाउनुभयो थिए।
यो सबै विगतमा, Liuba अर्को मानिस भेटिएन, र उहाँलाई विवाह गर्न सहमत छ। Lyubov Zaitseva - अभिनेत्री, जसको पति एक सार्वजनिक व्यक्ति हो। तारा पनि आफ्नो नाम, सही उमेर र पेशा कल गर्न इन्कार। यसलाई पूर्व प्रेमी Panina खुसीसाथ विवाह र एक छोरी मारिया हुर्काउन छ ज्ञात छ।
Devon विंडसर र यसको सफलताको कथा
VMP - यो के हो? चिकित्सा नयाँ प्रविधिहरू। स्वास्थ्य हेरविचार को वितरण
सौन्दर्य विद्यालय। बाल फलाम कसरी बनाउने?
नरम बन्द भान्सा एकाइहरु लागि टिका
जिन्स अन्तर्गत ज्याकेट पुरुष छनौट
एक बच्चा मा atopic dermatitis को उपचार कस्तो छ?